प्रेमीलाई लुटेर यि युवतीले किनिन् घर, किस्ता किस्तामा यसरी लुटिन् प्रेमीलाई
यि राशी भएका पुरुषहरुप्रति युवतीहरु फिदा हुन्छन्, तपाईको राशी कुन हो ?
न्युयोर्कमा पैसा लुट्दै अभिनेत्री प्रियंका चोपडा, उनको रेष्टुरेण्टमा २० रुपैया पर्ने एउटा समोसा १ हजार भन्दा बढीमा बिक्री
यि राशी भएका जोडी कहिल्यै छुट्दैनन्, झन् झन् मजबुत हुँदै जान्छ सम्बन्ध
गोमन सर्पसँग सुत्ने खाने गर्ने यि साहसी बालिका सामाजिक संजालमा भाइरल
खतरो के खेलाडी ११ की सबैभन्दा कान्छि प्रतिष्पर्धी अनुष्का सेनले आफ्नो जन्म दिन यसरी उदयपुरमा मनाइन्
लगातारको वर्षाका कारण जयपृथ्वी राजमार्ग चार दिनदेखि अवरुद्ध
कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी जवान ३१ वर्षीय हरिशकुमार मृत अवस्थामा भेटिए
सधै हसाउने टिकटक भाइरल ममता थापा मगरले सबैलाई रुवाइन, ब्वाइफ़्रेण्डसंग ब्रेकअप भएपछि तनाबमा !
नेपालबारे लिएको यस्तो निर्णय अन्तत फिर्ता लियो युएईले
हटियाबाट दुलेगौडातर्फ आउँदै गरेको जीप तनहुँमा पल्टियो
के मलाईकासँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो अर्जुनको ? धेरैपछि मलाइकाका बारेमा बोले
असार १ २०७८, मंगलबार
बलिउडकी हट एण्ड बोल्ड नायिका मलाइका अरोडा र अर्जुन कपुर बलिउडको सेलिब्रेटी कपलमा गनिन्नछन् । उनीहरु केही न केही कारण बाट सधै चर्चामा रहने गरेका छन् । लामो समय देखी यो जोडीको बिबाहको चर्चा चलिरहेको छ । २०१९ मा यी दूई जोडीले आफुहरु रिलेसनशिपमा रहेको आधिकारीक जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि देखी यो जोडीले कहिले बिबाह गर्छ सबैका लागि चासो बनेको छ । तर अहिले आएर कोरोनाको कारण यी दुई जोडीको मन बदलिएको छ । हालै एक अन्र्तबार्तामा अर्जुन कपुरले दुईबिचको रिलेसनसिप बारे मुख खोलेका छन् ।
अर्जुन कपुरलाई आफु भन्दा जेठि र एक बच्चाको आमा संगको रिलेशनसिपका बिषयमा सोध्दा उनले आफु अरु जस्तै आफ्नो ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा ज्यादा बोल्ने नगरेको बताए । उनले आफ्नो पार्टनरको तथा उसको बिगतलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने बताए ।
उनले आफु त्यस्तो अवस्थामा रहेको जहा यस्ता सार्वजनिक कुरा पहिला जस्तो गर्न नसक्ने र त्यसले बच्चालाई असर पर्ने बताएका छन् । मलाइका अर्जुन संग रिलेसनसिपमा रहनु अघि अरबाज खान संग बैबाहिक जिवनमा बाँधिएकी थिईन् । उनको अहिले एउटा छोरा अरहान खान रहेका छन् ।
जमिन मुनी बनेको संसारकै अचम्मको १८ तले पाँचतारे होटेलको सर्वत्र चर्चा
यो हो निकै महंगो मूल्य पर्ने कालो रङको स्याउ, तपाईले खानु भएको छ यो स्वादिलो स्याउ ?
दुनियाकै अनौठो आलु, जुन खाँदा जवान देखिन्छ र बिरामी परिँदैन
बेलायतको भब्य मन्दिरमा ज्योतीको तिज भिडियोको छायांकन, हेर्नुहोस् फोटोफिचर